Home Wararka Gudaha IMF oo war cusub kasoo saartay deyn cafinta Somalia
IMF oo war cusub kasoo saartay deyn cafinta Somalia
Guddiga Sare ee Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF) ayaa 17-kii Juun dhameystiray dib-u-eegistii labaad iyo saddexaad ee hannaanka amaahda ee la dheereeyay (ECF) ee Soomaaliya.
Go’aanka guddiga ayaa awood u siinaya in si degdeg ah loo bixiyo SDR 14 milyan (qiyaastii US$ 18.8 milyan), taasi oo ka dhigaysa wadarta kharashka Soomaaliya ee hoos yimaada (ECF) iyo (EFF) ilaa SDR 271.4 milyan (qiyaastii US$ 384.3 milyan).
Hababka ECF ee Soomaaliya waxaa markii hore ansixiyay Guddiga Fulinta 25-kii Maarso, 2020 taasoo qayb ka ah hannaan saddex sano ah oo isku dhaf ah oo hoos yimaada ECF iyo EFF, kaas oo ku lug lahaa SDR 252.86 milyan (155 boqolkiiba kootada) ee hoos yimaada ECF iyo SDR 39.57 milyan (24 boqolkiiba kootada) ee hoos timaada EFF.
Maaddaama qaddarka buuxa ee habaynta EFF lagu helay oggolaanshaha oo la sawiray iibkii ugu horreeyay, habbaynta EFF isla markiiba way dhacday.
Habaynta ECF waxa ay taageertaa hirgelinta Qorshaha Horumarinta Qaranka ee masuuliyiinta waxana ay ku qotontaa dib-u-habaynta u dhaxaysa Go’aanka HIPC iyo Qodobbada Dhamaystirka.
“Maamulka Soomaaliya waxa ay ilaaliyeen xasiloonida dhaqaalaha guud waxayna sii wadaan dardargelinta dib-u-habaynta, in kasta oo ay jiraan shoog badan. Marka laga soo tago caqabadaha ka imanaya Covid-19 iyo geeddi-socodka doorashooyinka daba-dheeraaday, haqab-beelka cuntada iyo dhaq-dhaqaaqa dhaqaalaha ayaa culays ku haya sababtoo ah xaaladaha abaareed ee daran, oo ay u sii dheer tahay kor u kaca qiimaha cuntada iyo tamarta adduunka. Mas’uuliyiintu waxay sameeyeen dadaallo xirfad leh si ay u maareeyaan caqabadahan, oo ay taageerto beesha caalamka, oo ay ku jirto qoondaynta guud ee SDR 2021,” ayey tidhi Ms. Antoinette Sayeh, ku-xigeenka agaasimaha maamulka iyo ku-simaha guddoomiyaha kadib dooddii guddiga fulinta
Masuuliyiinta waxa ay si joogta ah uga go’an tahay ajendaha dib-u-habaynta ee barnaamijka ay taageerto ECF iyo geeddi-socodka HIPC, kaas oo muhiim u ah dhisidda adkeysiga, kor u qaadista korriinka loo dhan yahay, iyo dhimista faqriga. Dadaalka joogtada ah ee mas’uuliyiinta ee lagu xoojinayo abaabulka dakhliga gudaha iyo maareynta maaliyadda dadweynaha waa mid ammaan mudan. Horumarka joogtada ah ee lagu samaynayo tayada hay’adeed ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya waa la soo dhawaynayaa. Waxay noqon doontaa muhiim in la sii wado horumarinta dib-u-habaynta si loo hagaajiyo AML/CFT iyo maamulka. Dadaal joogto ah ayaa loo baahan yahay si loo dhamaystiro HIPC qodobbada dhammaystirka kiciya iyo in la gaadho heshiisyada cafinta deynta dhammaan deyman bixiyayaasha.”
“Taageerada ka imaanaya la-hawlgalayaasha horumarinta, labadaba maalgelinta iyo kobcinta awoodda, ayaa muhiim u ah hirgelinta guusha leh ee istaraatiijiyadda dib-u-habaynta maamulka. Qaaraanka ka imaanaya saaxiibada Soomaaliya ee Sanduuqa Dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo hubiyo in si habsami leh loo gaarsiiyo kaalmada farsamo ee IMF si loo taageero yoolalka barnaamijka ay taageerto ECF iyo Hindisaha HIPC,” ayey ugu dambeyntiina tiri Antoinette Sayeh.
Previous articleMadaxweyne Xassan Sheekh miyuu ku Xanuunsan yahay Imaaraadka Carabta?
Next articleSuuqa kala iibsiga xagaaga: Ciyaartoyda ugu caansan Yurub ee bilaashka lagu heli karo
Maxaa sababay in natiijo la’aan uu kusoo dhammaado kulanka Muuse Biixi...
Madaxweyne Deni ma fulin doonaa ballan-qaadkiisi…..? –
Raysal Wasaaraha xafiiska jooga Rooble iyo Raysal Wasaaraha magacaaban ee...